रियल - एटलेटिको म्याचमा 10 यूरो फ्रीबर्ट
बोनसको म्याद सकिन्छ: अगस्ट 16, 2018
आज रात 19: 00 GMT, दुई उत्कृष्ट फुटबल टोलीहरू, रियल म्याड्रिड र एटलेटिको म्याड्रिड, युएफा सुपर कप फाइनल खेलमा भिड्नेछन्। यो खेल निर्णायक हुनेछ, त्यसकारण उनीहरूका फ्यानहरूले उनीहरूको सासलाई प्रक्षेपणमा समातिरहेका छन्; तिनीहरू यस क्षणको लागि यती लामो समय सम्म पर्खिरहेका थिए। दुबै टोलीसँग बराबर अवसरहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो योग्यता एक पटक पनि प्रमाणित गरेका छन्, तर तपाईंसँग पहिले नै मनमा उम्मेदवार छ, हैन? तपाईंको अन्तर्ज्ञानमा भरोसा गर्नुहोस् र हाम्रो विशेष उपहार प्रयोग गरेर तपाईंको मनपर्ने क्लब समर्थन गर्नुहोस्:
4. तपाईंको टीमको लागि ठूलो स्वरमा जयजयकार गर्नुहोस्।
फ्रीबर्ट हडताल सम्मको लागि छ 15.08.2018 21: 00 GMT 0
नि: शुल्क शर्त दुबै पीसी र "खेल" ट्याबमा साइटको मोबाइल संस्करणहरूमा प्रयोग गर्न उपलब्ध छ। नि: शुल्क शर्त लायक छ 10 usd / eur / aud / cad, 100 sek / nok / cny, 500 rur, 1000 jpy, तपाईंको खाता मुद्रामा निर्भर गर्दछ। फ्रीबर्ट केवल एकल शर्तको लागी न्यूनतम मल्टीप्लर 1.5 मा रियल म्याड्रिड र एटलेटि मैड्रिड म्याच, पूर्व म्याच वा लाइभमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। फ्रीबर्ट मार्फत तपाईंको बोनस ब्यालेन्समा तुरून्तै नगद बोनस को रूपमा 20x को wagering आवश्यकता संग उपलब्ध हुनेछ, केवल Sportsbetting मा भिसा गर्न उपलब्ध छ।
रियल - एटलेटिको म्याचमा 10 यूरो फ्रीबर्ट अपडेट गरिएको: अगस्ट 17, 2018 लेखक: Damon
बोभेगस बोनस कोडहरू
10 eur freebet मा ...